Qoys Soomaali ah oo dacwo kusoo oogey DF Maraykanka & waxa ay ku haystaan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Qoys Soomaali ah oo dacwo kusoo oogey DF Maraykanka & waxa ay...
Qoys Soomaali ah oo dacwo kusoo oogey DF Maraykanka & waxa ay ku haystaan
(Columbus, OH) 20 Maarso 2022 – Mashruuca Caawinta Qaxootiga Caalamiga ah ayaa todobaadkan gudbiyey dacwad ay wakiil uga yihiin Afkab Xuseen oo ah Soomaali qaxooti ku ah Ohio oo ay kala go’an yihiin xaaskiisa iyo caruurtiisa muddo ku dhow 7 sano.
Imaatinka qoyskiisa ee Maraykanka ayaa markii hore laga hor istaagay kaddib mamnuuciddii Muslimiinta ee Madaxweynihii hore ee Donald Trump, si kastaba ha ahaatee xitaa maamulka cusub ee Joe Biden, qoyska ayaa weli sii wada inuu la kulmo dib u dhacyo.
“Waxaan dacwadan u gudbinay anagoo ka wakiil ah macmiilkeenna waqtiga aadka u dheer ee aan laga fiirsan ee ay qoysku kala maqan yihiin,” qareenka sare ee dacwada IRAP, Melissa Keaney, ayaa sidaa u sheegtay The New Arab.
Xuseen ayaa isaga oo carruur ah ka soo cararay qalalaasaha ka jira Soomaaliya, wuxuuna ku soo koray xero qaxooti oo ku taal Kenya, halkaasoo uu kula kulmay xaaskiisa Rooda.
Tan iyo markii dib u dejinta loogu sameeyay Maraykanka 2015-kii, wuxuu awoodey inuu booqdo xaaskiisa iyo laba caruur ah oo yaryar laba jeer oo keliya. Ohio, waxa uu ka degay xaafad u leh dugsiyo fiican oo uu carruurtiisa u diyaariyey, taasoo ugu kacday lacag dheeraad ah. Keligii buu see halkaa ku yahay, isagoo weli war wanaagsan sugaya.
Qoyskiisa ayaa loo ogolaaday inay ku biiraan kahor mamnuucistii Muslimiinta ee 2017-kii, laakiin waxaa lagu xannibay amarka fulineed ee MW hore awgii, balse kaddib waxaa loo ogolaaday inay Maraykanka u safraan Janaayo 2020.
Yeelkeede, socdaalkooda ayaa markale la baajiyay maalin uun kahor xilligii loo qorsheeyay inay baxaan oo duulaan, waase xilli ay iibiyeen dhammaan alaabtoodii iyagoo filayey dib u dejin iyo inay midoobaan.
Xogta qaxootiga ee IRAP ayaa muujinaysa in badiyaa qaxootiga ay saamaysay xannibaaddu ay yihiin dad horay loogu oggolaaday in dib u dejin loogu sameeyo Maraykanka kuwaasoo weli xaalkoodu murugsan yahay.
“Saamayntii mamnuucida Muslimiinta weli waa la dareemayaa,” ayay tiri Keaney. “Isbeddelada lagu sameeyey habka [xilligii mamnuucida Muslimiinta] ayaa weli sii socota.” ayay raacisay.
Previous articleANNA WAYKAN: Kuuriyada Woqooyi oo gantaalo weli la garan la’yahay ku gantay Badda Jaallaha (K. Kuuriya oo heegan gashay)
Next articleDEG DEG: RW Rooble oo amar kasoo saaray kuraasida harsan & xubin laga tuuray Guddiga Doorashada Hirshabeelle